Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ee Ay Maanta Oo Salaasa Ah Qoreen Wargeysyada Yurub - Gool24.Net
Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ee Ay Maanta Oo Salaasa Ah Qoreen Wargeysyada Yurub
Maalin wanaagsan akhristayaasheena sharafta leh meel walba oo aad joogtaan, sida aan inooga barateen waxaan maanta oo Salaasa ah idiin soo gudbineynaa wararkii ugu danbeeyay ee ay qoreen wargeysyada iyo warbaahinta qaarada Yurub ee ku saabsan suuqa kala iibsiga ciyaartoyda.
Kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa sameeyay faro-gelin isaga oo toos ula xidhiidhay Neymar JR una sheegay inuu kusoo biiro Barcelona isla markaana iska diido xiisaha Real Madrid uga imanaya. (Marca)
Bayern Munich ayaa midkood Gareth Bale iyo Ivan Perisic qaab amaah ah kula sii wareegaysa inta uu taam ahaansho buuxa kusoo laabanayo Leroy Sane oo dhaawac ah isla markaana ay ka doonayeen Manchester City.
Paris Saint-Germain ayaa doonaysa inay Paulo Dybala kula soo wareegto lacagaha ay ka hesho heshiiska Neymar JR oo kooxdeeda ka baxaya kuna biiri kara midkooda Barcelona iyo Real Madrid. (RAI Sport)
Wargeyska AS ayaa sheegay in sababtii ay Tottenham uga baxday tartankii Philippe Coutinho maalintii ugu dambaysay suuqa ay ahayd maadaama oo ay Barcelona 35 Milyan ku doonaysay heshiiskaas oo kaliya amaah ahaa. (AS)
Arsenal ayaa samaynaysa saxeexeedii toddobaad iyadoo suuqu ka xidhan yahay waxayna ka dhigan kartaa Sami Khedira oo 32 sano jir ah kaas oo qaab xor ah ugaga soo biiri kara kooxda Juventus. (Calciomercato & Il Bianconero)
Khadka dhexe ee kooxda Ajax ee Donny Van de Beek ayaa sheegay in Ajax lagula jiro wadahadalo isaga lagaga doonayo isaga xilli si xoogan loola xidhiidhinayo Real Madrid waana hadal quus galinaya Paul Pogba oo doonayay u wareegista Madrid. (AS)
Wakiil Jorge Mendes ayaa u muuqda ka shaqaynaya heshiis uu ku burburinayo qorshayaashii Man United iyo Tottenham isaga oo Bruno Fernandes u gacan galinaya kooxda AC Milan. (RAI Sport)
Kooxda ree Talyaani ee Roma ayaa wadahadalo la yeelatay dhigeeda Man United iyada oo ka doonaysa Alexis Sanchez oo ay amaah ku rabto balse heshiiskan ayaa kaliya la isku waafaqi doonaa haddii Sanchez uu aqbalo mushahar dhimis weyn. (Corriere dello Sport)
Inter Milan ayaa doonaysa inay 90 Milyan ku bixiso Sergej Milinkovic-Savic oo Lazio ka tirsan waxaana ay ku faraxsan yihiin inay lacagtaas huraan haddiiba Mauro Icardi uu 70 Milyan kaga baxo kooxdooda. (Tutosport)
Man United ayaa kooxda Dinamo Zagreb miiska u saartay dalab 25 Milyan ah maalintii ugu dambaysay suuqa iyada oo ka doonaysay Dani Olmo balse kooxdaas ayaa dalabkaas soo diiday waxaana la filayaa in Red Devils ay xiisahooda nooleeyaan January. (Sportske Novosti)